Stroyneyuschim နှင့် postroynevshim လည်းတစ်ခါတစ်ရံတွင်ဥပမာအားဖြင့်, အဘယျသို့အခြို့သောသကြားလုံး, ချောကလက်ချင်တယ်။ ငါတို့သည်အွန်လိုင်းစျေးဝယ်ပူဇော်သောသူတို့ကိုချိုချဉ်အတွက်အမြဲသကြားပါရှိသည်နှင့်အညီအမှပမာဏရှင်းလင်းစွာအထောက်အကူမပြု။ အဘယ်သို့ပြုသနည်း
အရသာရှိတဲ့ကျန်းမာသကြားလုံးကိုယ့်ကိုကိုယ်ပြင်ဆင်ထားရန် - တစ်လမ်းရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, ပဲဟင်းအပေါ်အခြေခံပြီးအတော်လေးပိန်သကြားလုံးကိုပြင်ဆင်နိုင်ပါတယ်။
ပဲဟင်း - ကြောင်းကိုလည်းချက်ပြုတ်၏အမြန်နှုန်းအတွင်းအစောဆုံးပဲ undoubted အားသာချက်ထဲကတစ်ခု။ 20 ခန့်မှ 45 မိနစ်ခန့်အဆင်သင့်သည်အထိ welded အရောင်အားဖြင့်မတူညီပဲဟင်း, ၏ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးပေါင်း။
အဆိုပါပဲဟင်းကိုပဲစာဟင်းသီးဟင်းရွက်ပရိုတိန်း, ဖောလစ်အက်ဆစ်နှင့်ကြမ်းအမျှင်၏ကြီးမားသောငွေပမာဏဆံ့။ ဒါ့အပြင်ပဲဟင်းအတွက်အမျိုးမျိုးသောဗီတာမင် (အဓိကအားဖြင့်အုပ်စုများ A နှင့် B), fatty acid ကို Omega-6 နဲ့ Omega-3 ဆံ့နှင့်အသုံးဝင်သောပိုတက်စီယမ်, ဖော့စဖောရက်, ကယ်လစီယမ်, သံ, ကြေးနီ, molybdenum, မန်းဂနိစ်, ဘိုရွန်ကိုဘော့, အိုင်အိုဒင်း, သွပ်၌လိမ်း။ မီနူးဟင်းလျာများပဲဟင်းထဲမှာပုံမှန်ထည့်သွင်း, ဇီဝြဖစ်တိုးတက်ကောင်းမွန်လူ့သက်ရှိများ၏ genitourinary နှင့်ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်များတွင်ပုံမှန်။ ယေဘုယျအားဖြင့်, သင်သည်ဤ superpolezny ထုတ်ကုန်သဘောပေါက်ပါပြီ။ ကျန်ရှိသောအစိတ်အပိုင်းများလည်းအိမ်လုပ်သကြားလုံး၏ပြင်ဆင်မှုများအတွက်အများဆုံးအသုံးဝင်ကောက်ပါလိမ့်မယ်။
ပဲဟင်း - 300 ml ကို;
သင်္ဘောသဖန်းသီး - 150 ဂရမ်;
hazelnuts kernel ကိုသို့မဟုတ်အခြားအခွံမာသီး - အကြောင်းကို 100-130 ဂရမ်;
အရည်အသွေးအကိုကိုးအမှုန့် - 2-3 tbsp ။ ဇွန်း,
သကြား (ဖြစ်နိုင်ရင်အမှုန့်ပုံစံ) - 1-1,5 st ။ ဇွန်း,
ရမ် - 1 tbsp ။ ဇွန်း,
သစ်ကြံပိုး, နနွင်း, cardamom (optional) - 1 ဖြစ်တော့;
ရက်စွဲများထို့နောက်ရေပေါင်းစည်းခြင်းနှင့်ညင်ညင်သာသာအရိုးကနေအသီးကိုဖယ်ရှား, 30-40 မိနစ်ပြုတ်, နွေးရေထဲမှာစိမ်။
ပဲဟင်း iterate ထွက်ကိုလျှော်, (တန်းသည်နှင့်အညီ, အထုပ်အပေါ်ညွှန်ပြ) အဆင်သင့်သည်အထိရေအေးနှင့်အနာစိမ်းနှင့်အတူဖြည့်ပါ။ သငျသညျကိုပြုတ်ရေနှင့်အတူကကိုလျှော်နိုငျသညျ, တစ်ဦး colander အတွက်အဆင်သင့်ပဲဟင်းပစ်။
Nucleoli အခွံမာသီးပေါ့ပေါ့ခြောက်သွေ့ဒယ်အိုးထဲမှာ calcined ။ ပဲဟင်းလုံလုံလောက်လောက်ယူနီဖောင်း texture နဲ့အလေးချိန်ပြည်နယ်သည်အထိတစ်ဦး Blender ကိုအသုံးပြုပြီးအခွံမာသီးများနှင့်ရက်စွဲများနှင့် pyuriruem နှင့်အတူချိတ်ဆက်ပါ။
Vkusoobrazuyuschy တစ်ချောကလက်အဆာကိုပွငျဆငျ။ သကြားနှင့်အတူကိုကိုးအမှုန့်ရောနှော (သကြားဖုရှောင်ရှားရန်လိုအပ်) ။ အဆိုပါရမ်နှင့် Add နံ့သာမျိုး ။
ချောကလက်နှင့်အတူပဲဟင်း, ဖိနိတျပွညျ-ခွံမာသီးအလေးချိန်ရောထွေး Filler ။ ယင်းကစီဓါတ်၏သိပ်သည်းဆ Adjust ။
(လက်အား) သေးငယ်တဲ့ဘောလုံးဖွဲ့စည်းရလဒ်အစုလိုက်အပြုံလိုက် မှစ. meatballs သို့မဟုတ် meatballs တူသော (သင်, သင်တန်း, အသကြားလုံးနှင့် oblong ဖွဲ့စည်းလို့ရပါတယ်) ။ ကစီဓါတ်ပါသို့မဟုတ်ကိုကိုးအမှုန့်ထဲမှာလှိမ့်နဲ့တစ်ပန်းကန်ပေါ်ပျံ့နှံ့သွားခဲ့သည်။ အချို့သောအချိန်များအတွက်ကျနော်တို့ရေခဲသေတ္တာထဲမှာသကြားလုံးတစ်ပန်းကန်ထားတော်မူ၏။
သငျသညျအနညျးငယျကပိုအဆာသကြားလုံးလိုလျှင်သင်အနည်းငယ်နို့သဘာဝကမိုးသည်းထန်စွာမုန့်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုနှင့်ရေအတွက်ဖျက်သိမ်းအနည်းငယ်သို့မဟုတ်မည်သည့်သစ်သီးဖျော်ရည် gelatin ရိုက်ထည့်နိုင်ပါတယ်။
လက်ဖက်ရည်, ကော်ဖီ, ပူချောကလက်နှင့်အခြားအလားတူအချိုရည်အစေခံရန်သကြားလုံးကိုလက်စသတ်။
"ပျော်ရွှင်မှု Shards" - တစ်ပြောင်ပြောင်တောက်နှင့်ပွဲလမ်းသဘင်အချိုပွဲ
"အခွံမာသီး" - စာရွက်
အချော puff pastry ကနေ Apple က strudel - စာရွက်
သီးနှင့်အတူကိတ်မုန့် - စာရွက်
နို့ဆီနှင့်အတူ Waffle ကိတ်မုန့်
တစ်ဦး teriyaki ငံပြာရည်ပြင်ဆင်ထားရန်ဘယ်လိုနေသလဲ?
ခရီးသည်ခန့်မှန်းမထားတဲ့လေယာဉ်ခရီးစရိတ်၏ 25 လျှို့ဝှက်ချက်များကို,
ရေချိုးခန်းအတွင်းအစိုဓာတ်ကိုခံနိုင်ရည်ဖျင် - ဘယ်လိုတစ်ကယ့်ကိုအရည်အသွေးမြင့်လွှမ်းခြုံကိုရွေးချယ်သနည်း
Chokeberry ကူညီပေးသည်သောအရာကို မှစ. ?
Kendall Jenner နှင့်အခြားမော်ဒယ်ပွဲတော် Fyre ပွဲတော်တွင်အတူအရှုပ်တော်ပုံသို့ရေးဆွဲခဲ့ကြ
စိန် Tattoo - တန်ဖိုးကို
အညိုရောင် Scanty menses - အကြောင်းရင်းများ
40 နှစ်အရွယ် Kate Winslet သည်တစ်ဦးကလေးစောင့်ဆိုင်းမပါ
Bvlgari Jasmine အဆိုးမြင်အန္တရာယ်
အပြာရောင်ဘောင်းဘီဝတ်ဆင်ရန်အဘယ်အရာ မှစ. ?
Sorel ဖိနပ် - တိုင်းအရသာများအတွက်ခေတ်သစ် branded ဖိနပ်
စပျစ်သီးအမြိုးအနှယျရေနံ - ရိုးရာဆေးပညာ, cosmetology နှင့်ချက်ပြုတ်ရာတွင်အသုံးပြု